Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Busted! Ajaanibta ku dhuumaalaysta kuna cabba baarka Thailand
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Pattaya Pol. Col. Chitdecha Songhong, kormeeraha guud ee saldhiga booliska ee Nongprue, ayaa hogaamiyay koox sharci fuliyayaal ah oo weerar habeenki ah ku qaaday goob lagu caweeyo goor dambe oo habeen ah maalmo ka hor taariikhdu markay ahayd July 26, 2021.
Kow iyo toban ajaanib ah iyo hal Thai ah ayaa laga helay qeybta hoose ee baarka iyagoo cabaya cabitaanno aalkolo leh.
Qof walba waa la xiray waxaana lagu soo oogay inuu jebiyey Xeerka Degdegga ah.
Waqtigan xaadirka ah, Thailand waxay ku jirtaa amar xiritaan ah oo ay ku jiraan xayiraad ka dhan ah isu imaatinnada dadweynaha iyo iibinta ama cabitaanka aalkolada.
Waxay heleen waxay ahayd isku imaatin ay ka koobnaayeen 11 qof oo ajnabi ah iyo hal Thai ah oo khamri ku cabaya qolka maqaayada. Waa la qabtay waxaana lagu soo oogay inay jabiyeen Amarkii Degdega ahaa ayna diideen amarrada Waaxda Xakamaynta Cudurrada ee Chonburi ee ka dhanka ah isu imaatinnada dadweynaha iyo iibinta ama cabitaanka aalkolada.
Booliska Pattaya waxaa u sheegay dadka degan Soi Wat Boon Samphan in makhaayad cayiman oo ku taal aagga ay ku qabanayaan xaflado cabitaan joogto ah goobta, taas oo ay ogaayeen inay ka soo horjeeddo amarrada qufulka ee ay soo saartay Waaxda Xakamaynta Cudurka Chonburi.
Warka kale ee bar, fiidiyow sidoo kale soo muuqday 2 maalmood ka hor, oo muujinaya Pattaya caan ah "Coconut Bar" wuxuu u guuray Soi Buakhao. Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa dumarka si khiyaano leh u labbisan iyo ajaanibta waaweyn ee Pattaya oo wada fadhiya iyagoo aan lahayn waji-qarsoon markay cabbayaan. Wadaha mootada ee aagaas ayaa xaqiijiyay in dumarka looga shakisan yahay dhillooyinka ay habeen walba joogaan.